SQL Server ဆယ်တင်ရေးကိရိယာ SQL Server Software ကိုပြုပြင်ပါ။ MDF ပြုပြင်ရေးကိရိယာ။
DataNumen SQL Recovery အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံး SQL Server ကမ္ဘာပေါ်မှာပြန်လည်ထူထောင်ရေး tool ကို။ ၎င်းသည်အဂတိလိုက်စားနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသည့် MDF ဒေတာဘေ့စ်ဖိုင်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပြီးသင်၏အချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှပြန်လည်ရယူနိုင်ပြီးဖိုင်ဖောက်ပြန်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen SQL Recovery?
ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းသည်မီတာဖြစ်သည်ost SQL ပြန်လည်နာလန်ထူထုတ်ကုန်၏အရေးကြီးသောစံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောစစ်ဆေးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ DataNumen SQL Recovery အကောင်းဆုံးပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းရှိပါတယ်စျေးကွက်ရှိအခြားပြိုင်ဖက်များထက်များစွာပိုကောင်းသည်။
ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ DataNumen SQL Recovery ယှဉ်ပြိုင်ဆေးလိပ်သောက်
ရိုးရှင်းစွာထိရောက်သော, သောအံ့သြစရာကိုဆိုလိုသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့်မဟုတ်ရင်ငါရထားတဲ့ဖိုင်တွေကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်မရရှိနိုင်လို့ပါ
ရိုးရှင်းစွာထိရောက်သော, သောအံ့သြစရာကိုဆိုလိုသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်မဟုတ်ရင်လက်ရှိ covid-19 ပါ ၀ င်တဲ့သော့ခတ်ထားခြင်းကြောင့်ငါပြန်လည်ရယူခဲ့ရတဲ့ဖိုင်များကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်မရရှိနိုင်လို့ပါ။ မင်းအကြောင်းကိုမင်းကောင်းကောင်းပြောပြနိုင်မယ်။
မတ်လ 16th, 2020
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ ငါ sql ဒေတာဘေ့စပြုပြင်ရန်သင်၏ software ကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်။ သင်၏ကိရိယာများကို run ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုပြန်ကြည့်နိုင်ပြီဖြစ်သည် :)
ဒီဇင်ဘာလတွင် 13th, 2019
Great App! အရမ်းကောင်းတယ်! ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ဦး မျိုးနိုင် ဦး
စက်တင်ဘာလ 2nd, 2019
ဇန်နဝါရီလ 15, 2020
ဇူလိုင်လ 27, 2019
စူပါ tool ကိုနှင့်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒေတာဘေ့စပြန်လည်နာလန်ထူ tool ကို
စီအီးအို & ဟေး Flyer တည်ထောင်သူ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2020
အတွင်းကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသောအမှားအယွင်းများနှင့်ပြProbleနာများအတွက်ဖြေရှင်းချက် SQL Server MDF ဖိုင်မှတ်တမ်း
Sql Server တစ် ဦး ကယုတ္တိတသမတ်တည်း -based I / O အမှားရှာဖွေတွေ့ရှိ: မမှန်ကန်ကြောင်း Checksum
Sql Server ယုတ္တိတညီတညွတ်တည်းအခြေခံသော I / O အမှားရှာဖွေတွေ့ရှိ: Torn Page
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen SQL Recovery v6.0
ထောက်ပံ့ SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 ။
XML အမျိုးအစားအပါအ ၀ င်အချက်အလက်အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
အမြင်များ၊ အစပျိုးမှုများ၊ စည်းကမ်းများနှင့်ပုံသေသတ်မှတ်ချက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
သိုလှောင်ထားသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စကေးရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ inline table-တန်ဖိုးထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် multistatement table-valued functions များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
MDF ဖိုင်နှင့်သူနှင့်သက်ဆိုင်သော NDF ဖိုင်များအပါအ ၀ င်ဖိုင်များစွာကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
ပြန်လည်ထုတ်ယူထားသောအချက်အလက်များကို MDF ဖိုင်တွင်ထုတ်ပေးရန်အထောက်အပံ့။
ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) ဖိုင်များ (* ။ vmdk)၊ Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) ဖိုင်များ (* ။ vhd)၊ Acronis True Image ဖိုင်များ (* ။ tib) မှ MDF / NDF ဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။ Norton Ghost ဖိုင်များ (* ။ gho, * .v2i)၊ Windows NTBackup ဖိုင်များ (* ။bkf), ISO ပုံရိပ်တွေ (* ။ iso) နှင့် Nero image ဖိုင်များ (* ။ nrg)
ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု SQL Server tempo မှဒေတာrary tempdb.mdf ဖိုင်။
16TB အထိကြီးမားသော MDF နှင့် NDF ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
floppy disk များကဲ့သို့သောပျက်စီးနေသောမီဒီယာပေါ်တွင် MDF ဖိုင်များကိုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
Windows shell နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသဖြင့်သင်သည် Windows Explorer ၏အခြေအနေ (ညာခလုတ်) menu ဖြင့် MDF ဖိုင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen SQL Recovery အကျင့်ပျက်ခြစားမှု Recover ရန် SQL Server ဒတောဘေ့စျ
ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကြည့်ရှုပါ (Demo Version)
ဘယ်အချိန်မှာသင့်ရဲ့ SQL Server MDF ဖိုင်များသည်ပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီးပုံမှန်အားဖြင့်သင်ဖွင့ ်၍ မရပါ၊ သင်အသုံးပြုနိုင်သည် DataNumen SQL Recovery MDF ဖိုင်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။ ဖြစ်နိုင်သမျှဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူရန်။
မှတ်စု: မည်သည့်အကျင့်ပျက်သောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော MDF ဖိုင်များကိုမဆိုမီ DataNumen SQL Recoveryကျေးဇူးပြု၍ MDF ဖိုင်များကိုပြုပြင်ရန်အခြား application များကိုပိတ်ပါ။
ပြင်ဆင်ရမည့်ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသည့် MDF ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒေသခံကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် MDF ဖိုင်ကိုရှာရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ပျက်စီးနေသော MDF ဖိုင်နှင့်ဆက်နွယ်သော NDF ဖိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုပါက၎င်းတို့ကိုထပ်ထည့်နိုင်သည်။
MDF ဖိုင်ပျက်စီးသွားသည့်အရင်းအမြစ်ပုံစံကိုသိလျှင်၎င်းကိုသင်သတ်မှတ်နိုင်သည် -
အကယ်၍ သင်သည်ပုံစံကိုမသတ်မှတ်ပါကပုံမှန်အားဖြင့်၊ DataNumen SQL Recovery MDF ဖိုင်ရင်းမြစ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်ပုံစံကိုအလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, DataNumen SQL Recovery ပြုပြင်ထားသော MDF ဖိုင်ကို xxxx_fixed.mdf ဖိုင်အသစ်သို့သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ xxxx သည်ရင်းမြစ် MDF ဖိုင်အမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ MDF ဖိုင် Damaged.mdf ဖိုင်အတွက်ပုံသေဖိုင်အတွက်ပုံမှန်အမည် Damaged_fixed.mdf ဖြစ်သည်။ အခြားအမည်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပါ။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်, သင် s နိုင်ပါတယ်tart SQL Server စီမံခန့်ခွဲမှုစတူဒီယိုနှင့်သက်ဆိုင်ရာပြန်လည်ကောင်းမွန်ဒေတာဘေ့စရယူပါ
ခလုတ်, DataNumen SQL Recovery ချိတ်ဆက်ရန် "ဆက်သွယ်ပါ SQL Serverအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း "dialog box:
သင်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည် ဆာဗာအမည် နှင့် Authentication ကို အတွက် SQL Server ဥပမာကွန်ပျူတာ (သို့) ဝေးလံခေါင်သီသောကွန်ပျူတာရှိ၊ ထို့နောက်“ OK” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအခါ DataNumen SQL Recovery အလိုလိုtar• MDF ဖိုင်ရင်းမြစ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း။ တိုးတက်မှုဘား
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်အရင်းအမြစ် MDF ဖိုင်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်ပါကအောက်ပါအတိုင်းစာတိုလေးကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အခုမင်းပဲtart SQL Server စီမံခန့်ခွဲမှုစတူဒီယိုနှင့် MDF ဒေတာဘေ့စ်ရှိဒေတာများကိုရယူပါ။
DataNumen SQL Recovery 6.0 ကိုဇွန်လ 22, 2021 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ကော်လံတစ်ခု၏ nullable property ကိုပြန်လည်ရယူရန်အထောက်အပံ့။
DataNumen SQL Recovery 5.9 ကိုမေလ ၃ ရက်၊
စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ အီတလီ၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရုရှား၊ ဂျပန်၊
DataNumen SQL Recovery ၃.၂ ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen SQL Recovery ၂.၉ ကို ၂၀၂၀၊ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen SQL Recovery 5.1 ကိုဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊
ထောက်ပံ့ SQL Server 2019 ။
DataNumen SQL Recovery 5.0 ကိုဇွန်လ 5, 2020 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
DataNumen SQL Recovery 4.5 ကိုAprilပြီလ 25, 2020 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
DataNumen SQL Recovery ၃.၂ ကိုမတ်လ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen SQL Recovery ၃.၂ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်၊
DataNumen SQL Recovery 4.1 ကိုAprilပြီလ 11, 2019 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
DataNumen SQL Recovery ၃.၁ ကို ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen SQL Recovery 3.0 ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ထောက်ပံ့ SQL Server 2017
ထောက်ပံ့ SQL Server 2016 ။
DataNumen SQL Recovery ၂.၆ ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်၊
DataNumen SQL Recovery ၁.၂ ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက် ၂၀၀၄ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen SQL Recovery ၂.၁ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၅ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen SQL Recovery ၂.၁ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မေလ ၁၅ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) ဖိုင်များ (* .vmdk)၊ Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) ဖိုင်များ (* .vhd)၊ Acronis True Image ဖိုင်များ (* .tib) မှ MDF / NDF အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု Norton Ghost ဖိုင်များ (* .gho, * .v2i)၊ Windows NTBackup ဖိုင်များ (* ။bkf), ISO image file (* .iso) နှင့် Nero image files (* .nrg)
DataNumen SQL Recovery 2.2 ကိုမတ်လ ၁၈ ရက် ၂၀၁၀ တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
DataNumen SQL Recovery ၂.၀ ကို ၂ ဝဝ ၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ထောက်ပံ့ SQL Server 2014 ။
DataNumen SQL Recovery ၂.၀ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen SQL Recovery ၂.၂ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊
MDF format နဲ့ output file ကိုပံ့ပိုးမှု။
ထောက်ပံ့ SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012 ။
XML အမျိုးအစား မှလွဲ၍ ဒေတာအမျိုးအစားအားလုံးကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
အဂတိလိုက်စားမှုရှိသော Microsoft Access ဒေတာဘေ့စ်များအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိရိယာများအပါအဝင်၊ DBF ဒေတာဘေ့စ။
အဂတိလိုက်စားမှုကိုပြန်လည်ရယူပါ Oracle DBF ဒေတာဘေ့စဖိုင်များ။
ပျက်စီးနေသော dBase, FoxBase, FoxPro နှင့် Visual FoxPro ကိုပြုပြင်ပါ DBF ဖိုင်များကို။
ပျက်စီးနေသော Microsoft Access databases (.mdb နှင့် .accdb files) ကိုပြန်လည်ပြုပြင်။ ပြန်လည်ရယူပါ။
DataNumen Archive Repair ၂.၁ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မေလ ၁၅ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်